Tangres Industiral CO., LTD Niorina tamin'ny 2010, hita ao amin'ny "Shinoa Ceramic City - Foshan Guangdong". Nanomboka ny fananganana, ny orinasa no nanantitrantitra ny fitantanana ny teorian'ny "Miara-miasa fo iray ary handresy izao tontolo izao amin'ny fahadiovam-po". Amin'ny alalan'ny fitsapana sy zava-tsarotra, dia miforona ho ao an-be-ambaratonga orinasa vahiny varotra.
Ny sehatra ny raharaham-barotra dia anisan'izany ny eny ifotony, varotra, ary ny mpandraharaha ny fanafarana sy ny fanondranana. Ny orinasa ihany koa ny tena miasa akaiky amin'ny mpitondra noho izany dia afaka manampy ny mpanjifa hahazo ny tsara indrindra Ranomasimbe entana. Ao ny fifadian-kanina-miova tanimanga izao tontolo izao, ny orinasa dia hampivelatra haingana, sy ny vokatra varotra foana mitombo isam-bolana, amin'ny tanimanga taila, Stainless vy lakozia hilentehan'i Stainless vy sisin-tany, manasa tavy, 3D karipetra kapila tanimanga, ary toy izany vokatra mivarotra tsara anatiny sy ivelany ny firenena ary nahazo ny fitiavana sy avo sarobidy fiderana avy amin'ny mpanjifa.
Ny antony mahatonga ny orinasa dia afaka manao zava-bita tsara dia tsara toy izany ao amin'ny maranitra fifaninanana dia ny tsara sy ny falehan'ny olona mitaona mpanjifa ny vokatra tsara, sy ny tonga lafatra aorian'ny-mandresy ny tolotra fivarotana ny tsena, ary ny vokatra tsara miaraka amin'ny tolotra tsara ny hahomby Tangres ankehitriny. Ny ekipa matihanina manana fahalalana tsara ka manao ny tena fanoloran-tena sy amim-pahombiazana. Business mpiasan'ny manana traikefa matihanina varotra any ivelany sy ny fahalalana ny vokatra. Fanofanana arak'asa maintsy mpandraharaha, ary hanatratra anglisy ambaratonga mifanaraka notakin'ny ny fikambanana ny governemanta, ary hahazo Documentation-pahaizana iraisam-pirenena Certificate fahaizana mifanaraka navoakan'ny fikambanana ny governemanta.
Tangres , namaly avy hatrany ho any an-tsena fiovaovana mba hitarika ny fironana! Hatsarao foana ny tonga lafatra! Miezaka ny tsara indrindra hanome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra!